Sitelock: Chebe gị WordPress weebụsaịtị na ndị ọbịa | Martech Zone
Sitelock: Chebe WordPress weebụsaịtị na ndị ọbịa
Wenezde, August 15, 2018 Douglas Karr
Nchedo WordPress bụ otu n'ime ihe ndị ahụ a na-ahapụkarị ruo mgbe oge gafeworo. Ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ a gwara m ka m nyere aka hichaa saịtị a wakporo. Mwakpo ahụ na-eme n'ihi na a hapụrụ WordPress na-enweghị mmelite na oghere nchekwa amara ama. Ma ọ bụ, ọtụtụ mgbe, ọ bụ isiokwu mepụtara nke ọma ma ọ bụ ngwa mgbakwunye na-edobeghi ya.
Enwere ọtụtụ ebumnuche dị iche iche maka hacking WordPress, gụnyere ịnweta adreesị ozi-e onye ọrụ na onye na-ekwu okwu, ntinye backlinks na-egwu aghụghọ search engines, ma ọ bụ ịgbanye malware nke na-eme ka okporo ụzọ gaa na saịtị enweghị aha. The hackers na-emepe emepe a na-eme a Bang-elu ọrụ nke imebi gị na saịtị, kwa. Ha ga e wunye scripts na wunye scripts… ya mere, i hichaa otu file na a nkeji ole na ole mgbe e mesịrị ọ na-oria ọzọ.
Kasị njọ, mgbe saịtị gị butere ma ị maghị banyere ya - saịtị gị ga-ahụ ozugbo na listi ojii nke ihe nchọgharị na engines ọchụchọ jiri zere iziga ndị ọbịa gị.
Ejirila saịtị ole na ole m kpochara, na-achọ ka m were saịtị ahụ na-anọghị n'ịntanetị, na-edegharị WordPress isi faịlụ, wee na-aga n'ahịrị site na isiokwu, plugins na ọdịnaya dị na nchekwa data iji chọpụta malware. Ọ na-afụ ụfụ.
Inweta Hacked na WordPress bụ Preventable
Na mpụga nke ijigide WordPress, plugins gị, na gburugburu na nsụgharị ndị ọhụrụ, enwerekwa ụfọdụ nyiwe dị ukwuu ebe ahụ iji chebe gị. Mkpọchi saịtị, onye ndu ndu igwe ojii, nchekwa nchekwa websaịtị zuru oke, tụgharịrị uche ya na WordPress wee mepụta ohere zuru oke nke nhọrọ maka obere, ọkara, na azụmaahịa ụlọ ọrụ iji chekwaa saịtị WordPress ha. Ha na-enye ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na ọbụlagodi azịza.
Hụ nchịkọta WordPress nke Sitelock
Sitelock nyere onyinye WordPress gụnyere atụmatụ na ọrụ ndị a:
Akpaghị aka na saịtị ahụ nyocha
Iwepụ malware na-akpaghị aka
Akpaka iyi egwu nchọpụta scanning
Akpaghị aka WordPress patching
Ihe nyocha data
Nhicha nchekwa data akpaghị aka
Ọzọkwa, Sitelock nwere ụfọdụ nnukwu atụmatụ iji melite saịtị WordPress gị, gụnyere:
Bot igbochi bot
Customizable okporo ụzọ nzacha
Database agha igbochi
Mgbe ihe na-adịghị mma, ndị ọkachamara ọkachamara na Sitelock nwere ike ịnye mmezi hacking na mberede mwepụ aha ojii. Ma - n'adịghị ka azịza ndị ọzọ dị ebe ahụ - Sitelock nwere nkwado 24/7/365 dị maka ndị ahịa ya niile!
ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ nke Sitelock na ịkwalite ọrụ ya.
Douglas Karr Wednesday, August 15, 2018
Ihe Anọ Na-ahụkarị na Commonlọ Ọrụ Ndị Gbanwere Mgbasa Ozi Digital Ha
Ka anyị kpata ego: 8zọ asatọ iji gbanwee ahịa mgbasa ozi ọhaneze na ahịa